Umnyhadala wama-20 ku-Epreli, uhlaziyo lokufana, kunye nokunye. Eyona veki ilungileyo ndivela kuyo iMac | Ndisuka mac
Iveki ebalulekileyo yabasebenzisi kunye neApple uqobo emva kokubhengezwa ngokusesikweni kwefayile ye- Umnyhadala "wolayishwe ngentwasahlobo" wenyanga ezayo ka-Epreli 20. Kule veki siqale somelele ngokuvuza okuvela ku-Apple uqobo, ngoSiri, apho kuthiwa ubhengeze umsitho we-20.Emva koko, uApple waqinisekisa ngokusemthethweni intetho. Indlela iveki edlula ngayo isiqinisekiso esisemthethweni salo msitho sinezinye iindaba ezininzi ezibalaseleyo ezivela eMac.Ngoku ngokuzolileyo (njengoko isitsho njalo ingoma yengoma yasehlotyeni) siza kubona ezinye zazo.
Siqala esi sishwankathelo seveki umbuzo wokuba ingaba ngoku lixesha elifanelekileyo lokuthenga iMac. Okwangoku ukuthengwa kwezi zixhobo kuya kusiba nzima kuba kukho uqikelelo lohlaziyo lwalo nyaka kodwa njengoko sihlala sisitsho njalo iya kuxhomekeka kumsebenzisi ngamnye kunye neemfuno zomntu.
Asinakukutyeshela Isiqinisekiso esisemthethweni esenziwe nguApple somsitho nge-20 ka-Epreli. Ezi ndaba ngokuqinisekileyo zezona zibalaseleyo evekini kunye nazo zonke Silindele iApple ukuba yothuse kunye nezinye iimveliso ezinomdla kumsitho.
Inguqulelo yamva nje yesoftware yokufana Sele ihambelana nazo zonke iiMac kunye neprosesa ye-M1. Le software isivumela ukuba sisebenzise iiWindows kwiMacBook yethu ngendlela elula nefanelekileyo, ukongeza Ngokufika kweprosesa ze-M1, ubumdaka kwinkqubo yokusebenza kaMicrosoft ingaphezulu kokucacileyo.
Ukugqiba i-LG kusothuse ngamarhe ekuthiwa anokwenzeka ube ngumenzi okanye uthathe inxaxheba kwiprojekthi yeApple Car. Ngale ndlela, ezinye iindaba malunga ne-LG ezichaphazele ukwahlulwa kwayo ziindaba, kwaye kunjalo Imveliso ye-LG egcinwe iselfowuni kule veki kananjalo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Umnyhadala wama-20 ku-Epreli, uhlaziyo lokufana, kunye nokunye. Eyona veki ibalaseleyo ndivela eMac
IiVenkile ezininzi zeApple ziphumile kwisitokhwe se-iMac ezingama-21,5-intshi